SingForYou.net - Nay Nyo Yin Shwebo Ko Lwan Tal
Nay Nyo Yin Shwebo Ko Lwan Tal
Tags : နေညိုရင် ရွှေဘိုကိုလွမ်းလိုက်ပါ့ ...။
By : greenlay on Nov 20, 2009
Score: 114 Rating: 4.96 Comments: 40
Nay Nyo Yin Shwebo Ko Lwan Tal's Description
အလွန်သာယာပါတယ်အမရေ။ ဘမာပြည်ကိုတောင်သတိရသွားတယ်။ဇော်ခိုင် & လုံးပု****************}
romeo on Mar 4, 2010 0
dar lae xo htar dar kg dal bya.....
kounghtetsan on Feb 5, 2010 0
ကောင်းတယ်ဗျာ.. သူငယ်ချင်းေ၇.. မြန်မာသံစစ်စစ်လေးပဲဗျာ.. ရှယ်ပဲ.. နားထောင်ရတာ. အားပေးသွားပါတယ်..5************* ခင်မင်လျှက်. ကောင်းထက်
thetnyein on Feb 4, 2010 0
ဆိုသံလေးနဲနဲ....တိုးနေတာကလွဲရင်.. ဆိုထားတာ....ကောင်းပါတယ်...အသံလဲကောင်းတယ်... မမစိမ်းရေ...အားပေးသွားပါတယ်....။
a yann kg tel...a ma green lay yay....narr htaung lo....taw taw kg tel byar...a nhit pel....bravooo.....5*4u...a ma yay.
myobala on Dec 14, 2009 0
မမစိမ်းရေ....ဘွဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့အရမ်းလှနေပါလားဗျ...ဟိုတုန်းကတော့ကွင်းပေါ့နော်....ဟိဟိ...ဆောရီးမမစိမ်းရေ....တခါတခါ သတိမထားမိလို့ပါနော်.....လုပ်ချင်တာတွေကများနေလို့ လူကလိုက်လို့မနိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ...မမစိမ်းတို့ မိသားစုအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်အရာရာအဆင်ပြေကြပါစေနော်.........
hippo on Nov 26, 2009 0
အရမ်းကို နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ အိမ်တောင်လွမ်းလာပြီနော်။ ရွှေဘိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ :-)
greenlay on Nov 26, 2009 0
သူငယ်ချင်းရေ ကျေးဇူးပါ ၊ မစိမ်းကတော့ အချိန်တိုင်းမှာကို အိမ်လွမ်းနေသူပေါ့ :)
KoBurma on Nov 21, 2009 0
လွမ်းတာတောင် Duty နဲ့နေညိုမှ လွမ်းတဲ့မမစိမ်း အတွက် ၅စတားစ် ဆိုးဂွတ် ... :D:P:)
greenlay on Nov 22, 2009 0
ကိုဘားမားရေ ပြောလည်းပြောတတ်ပါပေ့နော် ၊ ကျေးဇူးပါ :)
moeluu on Nov 21, 2009 0
Nice classical.. one of your good songs.. Thumbs Up!. All* voted.
greenlay on Nov 23, 2009 0
ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်းရေ ။
aungtun1 on Nov 21, 2009 0
sis greenlay,, sis song tay ko, narr ma htung ya tar kyar pi,,,,,dsong lay ko sis so hter tar, nar htung lotayannn kaung par tal, sister......5***********
မောင်လေးရေ သိပ်မမြှောက်နဲ့နော် , မစိမ်းက ဒီလိုတေးသီချင်း မျိုးကိုပဲ နှစ်သက်လို့ပါ , ကျေးဇူး မောင်လေး ။
Phyogyi on Nov 21, 2009 0
ဒီနေ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ.ရွှေဘိုသီချင်း ၂ပုဒ်နားထောင်..............လိုက်ရတယ်ဗျာ..... ကောင်းမှကောင်းပါပဲဗျာ..... သတိရနေတာနဲ့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်...ဒီသီချင်းလေးကိုဆိုပေးတဲ့ .....sis...greenlay...ကို..special...thanks...ပါဗျာ... Many.*********************for...sis.....greenlay......သေချာကိုနားထောင်အားပေးသွားပါ တယ်ဗျာ.................................Phyogyi.........
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကြီးဖြိုး , ကိုလုံးရာဆိုထားတဲ့ သီချင်း က တစ်ကယ့်ကို အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး အရမ်းလည်းကောင်းတဲ့ သီချင်းပါ ။
susannyunn on Nov 21, 2009 0
HUT YEL..... lwann sayr g nawt....great one par ..mama sein yay.... :clap :clap:clap,....>>>>
greenlay on Nov 21, 2009 0
Sis lay ... kay zuu kay zuu :)
brownlay on Nov 21, 2009 0
hmyaw lite ya dar ma sain yael.. hmyaw ya kyo nat par tel..dsong myo kodlo paing paing naing naing so hnaing darayann taw tar bel .... ta kel,ahote, really kg par tal ma sain **************
ညိုလေးရေ .....အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
lonyar on Nov 20, 2009 0
greenlay on Nov 20, 2009 0
အားပေးတာကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်း ၊ အမေနဲ့ ရွာကိုတော့ ... နေ့စဉ် , နေ့တိုင်း , အချိန်တိုင်းမှာ လွမ်းနေတာပါ ။
SOPHIASIN on Nov 20, 2009 0
maung309 on Nov 20, 2009 0
Ko maung309 ရေ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
mayangel on Nov 20, 2009 0
ma sain yay taw lite tar.... ma sain ka pyi shwebo ka lar hin....very nice to listen. *********
ကျေးဇူးပါ အမ ၊ ပီပီက အတင်းဆိုခိုင်းနေတာနဲ့ နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းကို ဆိုလိုက်တာပါ။
SKB on Nov 20, 2009 0
၀ိုးးးးးးးးးးးးးးးကောင်းမှကောင်း မအစိမ်းလေးရေ မမစိမ်းရေ ကောင်းမှကောင်း မြန်မာသံစစ်စစ်ပဲ
Ko SKB ရေ ကျေးဇူး ၊ သူငယ်ချင်းကို မမှီပါဘူးနော်:D
mrcastle on Nov 20, 2009 0
jedi on Nov 20, 2009 0
kg tae byar like it
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်လေး :)
pp01 on Nov 20, 2009 0
Way.. hay.hay.. Ma Sain kwa.. pyaung myaunt lite tae aso..aye chan lwon hla par tel.. htet so par ohnn. Ma Sain ko myin lot.. out pyii mha, myan myan lay pyan win lar tar..Gazillion stars****************************************************************
ပီပီရေ , ဆိုပြီနော် ၊ စတားလက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူး ကျေး ဇူး ၊ညီအမတွေက ဆိုထားကြတော့ အားကျတာပေါ့ :D
thant on Nov 20, 2009 0
wooow......myal lite ya tar ma seinn yay.....athan lay ka yin htal ko aye thwar tar bal......makyar khana so par oo......song htway upload lote payy lo lal ayann kyay zuu tin par tal........*******
မရေ ,ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ မလောက်တော့ အသံမကောင်းပါ ဘူးနော် :)
maureen on Nov 20, 2009 0
မရေ.. အသံလေးက ကောင်းလိုက်တာ.. မြန်မာ သံစဉ်လေးတွေ ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းသလို ခံစားရတယ်.. အားပေးနေပါတယ်ရှင်..************* fo ru..
အရင်ဆုံးအားပေးသွားတဲ့ ညီမလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
Feedback : 40
Subscribe to greenlay